Atolotry ny Diabe Aurat 2021 ny manifesto fikarakarana ara-pahasalamana feminista ao Pakistan · Global Voices teny Malagasy
Nitaky ny hampiakaran'ny governemanta ny tetibolam-pahasalamana hahazoan'ny vehivavy fikarakarana ara-pitsaboana tsara kokoa ireo mpanao fihetsiketsehana.
Voadika ny 30 Marsa 2021 4:39 GMT
Diabe Aurat 2021 tany Islamabad. Hoy ny sora-baventy hoe “Midika hoe fiarahamonina afaka ny vehivavy afaka.” Sary avy amin'ny vondrona Facebook Diabe Aurat Azadi, nahazoana alàlana.
Nanao fihetsiketsehana ireo vehivavy tany Pakistan nandritra ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Vehivavy nitaky hananana toerana ho azy ireo eo amin'ny fiarahamonina, nitaky ny zon'izy ireo, ary nitaky ny rariny avy amin'ny rafitra fanjakazakan-dehilahy tsy mampahomby azy ireo. Tamin'ity taona ity, niompana tamin'ny voka-dratsin'ny valan'aretina COVID-19 tany Pakistan ihany koa ny hetsika Diabe Aurat (Diaben'ny Vehivavy). “Valan'aretin'ny fanjakan-dehilahy” hoy ireo mpanao fihetsiketsehana ka nitaky ny hampiakaran'ny governemanta ny tetibola ara-pahasalamana ho 5 isanjaton'ny harinkarena faobe izy ireo mba hisitrahan'ny vehivavy fikarakarana ara-pitsaboana tsara kokoa.
Nandritra ny taona efatra nisesy, nikarakara fihetsiketsehana nanerana an'i Pakistan ny fikambanana feminista Hum Aurtein, izay nomarihina tamin'ny diabe, fampiratiana zava-kanto ho an'ny daholobe ary fampisehoana manasongadina ny fanamby atrehin'ireo vehivavy.
Anisan'ny olana nahasarika ny sain'ny mpanao fihetsiketsehana ny firongatry ny herisetra an-tokantrano sy ny fanararaotana ankizy manerantany noho ny fihibohan'ny fianakaviana tao an-trano nandritra ny valan'aretina ary tsy nahazo fitsaboana na fanampiana ampy ireo vehivavy ary tsy nisy hafa tamin'izany no nitranga tao Pakistan.
Samy nanoratra manifesto isankarazany ny faritra isan-tanàna tamin'ny Diabe Aurat (Islamabad, Lahore, Karachi, Multan, Bahawalpur, Hyderabad).
Nifantoka tamin'ny fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny vehivavy ny manifesto tao Lahore.
Mirehareha amin'ny fizarana ny manifesto-ny, “Manifesto Feminista momba ny Fikarakarana Ara-pahasalamana” ny Diabe Aurat 2021 tao Lahore.
Jereo eto: https://t.co/iLsYn1u9Vo
Ezaka niarahana niasa ity antonta-taratasy ity, novolavolaina nandritra ny volana maro tamin'ny fikarohana sy ny FIHAINOANA.
Nifantoka tamin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy, ny olona niova fananahana ary ireo olona sady tsy lahy no tsy vavy ny manifesto tao Karachi.
Ity ny fandaharam-potoananay miisa 15 amin'ity taona ity! Famintinana ny satanay feno mirakitra ireo fitakiana sy mifantoka tanteraka amin'ny lohahevitry ny herisetra atao amin'ny vehivavy, ireo olona niova fananahana ary ireo olona sady tsy lahy no tsy vavy.
(Sada haq, Aithay rakh – Apetraho eto ny zontsika. Aurat Dharna – fitokonan'ny Vehivavy.)
Nifantoka tamin'ny olana miainga amin'ny fahasalamana, ny rariny ara-toekarena ary ny herisetra vokatry ny fanjakan-dehilahy ka hatrany amin'ny kileman'ny fitsarana sy ny krizin'ny fiovan'ny toetr'andro ny tao Islamabad.
DIABE AURAT AZADI 2021 SATAN'NY FITAKIANA
Mifandraika amin'ny lohahevitra tamin'ity taona ity momba ny krizy ara-pahasalamana amin'ny valan'aretina coronavirus ny fitakianay. Manomboka amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana, ny rariny ara-toekarena ary ny herisetra vokatry ny fanjakazakan-dehilahy ka hatrany amin'ny kilema ara-pitsarana sy ny krizin'ny fiovan'ny toetr'andro ny olana nasongadinay.
Mahakasika hatrany ireo olana maika any Pakistan ny Diabe Aurat. Isan-taona, mitondra ny tantaran'ny namany sy ny fianakaviany izay lasibatry ny fiarahamonina anjakazakan'ny lehilahy ny olona.
Mora kokoa ny mipetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mahafinaritra ary mitsongoloka momba ny olana ara-tsosialy, tsy azonao an-tsaina akory anefa raha ny marina ny mipetraka eo amin'ny toeran'ireo niharam-boina mitaky ny fahamarinana!
Tao amin'ny Diabe Aurat 2021 tao Karachi no nahenoko an'i Neha nizara ny fitantarana mampivarahontsana momba ny fanovana an-tery sy ny fanambadiany (1)
Avy any Chitral ity tovolahy ity. Nilaza izy fa noterena hiova ary nampanambadiana ny vehivavy Kalasha. Izany no antony anaovany diabe anio.
Zavakanto sy ny hetsi-panoherana ao Lahore
Fihetsiketsehana amin'ny endriny vaovao – teny faneva amin'ny akanjo mihantona, Diabe Aurat 2021 tany Lahore, Pakistan. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Nahitana ny famoronana zavakanto mampiseho ireo “pentin'ny fanjakan-dehilahy ” amin'ny akanjom-behivavy ny Diabe Aurat tany Lahore, ary niantso izany ho “lamba maloto” izy ireo. Hita tamin'izany ny hafatra avy amin'ny vehivavy sy ny tovovavy, milaza ny taona nanombohan'izy ireo niaina voalohany ny herisetra, ny fanorisorenana, ny herisetra ara-tsaina ary ny fandavana ny fahalalahan'izy ireo.
Tandremo fa mety ahatohina ny sary
Isa-taona, tonga miaraka amina hevitra lehibe hanasongadinana ny olan'ny vehivavy, ny fanaintainana, ny rà latsaka sy ny fatiantoka #diabeaurat… miresaka momba ny zava-drehetra niainan'ireo zazavavy, vehivavy ity fampisehoana ity….
Namorona zavakanto feminista ho an'ny daholobe ireo artista sy mpanao tefibika manerana ny firenena mitantara ny tantaran'ny vehivavy, ny fiaretan'izy ireo, ny fijalian'izy ireo eo amin'ny fiarahamonina, manasongadina ny fotokevitra lehibe ao amin'ilay manifesto.
Naseho ihany koa ny afisy lamba mena #MeToo (Izaho koa), ahitana tantaran'ny fanararaotana, fanorisorenana, herisetra, mampiseho ny rafitra izay niteraka tsy fahombizana ho azy ireo nandritra ny taona maro.
TANDREMO METY HANOHINA NY SARY // FANOLANANA SY HERISETRA #DiabeAuratLahore mamelatra ny afisiny #metoo. Nizara ny zavatra niainany tamin'ny herisetra ara-nofo sy fanararaotana vehivavy. Mizara sombintsombiny kely avy amin'ny lamba firakotra izay entin'ny mpanao diabe amin'izao ora izao izahay.
Nihira ny hiran'ny feminista Shiliana “You are the Rapist” (Ianareo no mpanolana) amin'ny fiteny Urdu ireo mpanao fihetsiketsehana tao Lahore , ary nandihy tamin'ny hira folk Sufi (mistika) i Alina, vehivavy niova taovam-pananahana.
Teny filamatra sy fanehoan-kevitra
Nanatrika ny diabe tao Lahore ihany koa ireo vehivavy, tovovavy, ireo niova taovam-pananahana ary ny olona izay sady tsy lahy no tsy vavy sy ny lehilahy avy amin'ny sokajin-taona rehetra, nilanja sora-baventin'ny teny filamatra fanoherana ny fanjakazakan-dehilahy.
Ilay andro tsara indrindra ara-bakiteny!!
Tao amin'ny diabe Aurat 2021
Andro vitsy talohan'ny nanaovana ny diabe Aurat dia nanomboka niparitaka be ny fironana tamin'ny fanoherana izany tao amin'ny tambajotra sosialy. Nilaza ny tenirohy fa vatsian'ny any ivelany vola sy mampiroborobo ny fomba fisainana tandrefana ny diabe Aurat. Nilaza ihany koa ny olona fa mifanohitra amin'ny finoana ara-pivavahana io diabe io ary efa manana ny zony ny vehivavy ao amin'ny Islamo.
Nisioka i Khalil Ur Rehman Qamar, mpanoratra tantara an-tsehatra sady tale (nofafana ilay sioka taty aoriana):
Anarana mahamenatra ny Diabe Aurat. Ny ONG Tandrefana manohitra ny Islamo no mikarakara izany. Natao hanodinkodinana ny sain'ny vehivavy Miozolomana amin'ny anaran'ny fahalalahana no tetipanoron'ny feminista, saingy tokony hampiharihary ny tena endrik'izy ireo isika sy ireo olona ao ambadik'izy ireo.
Ireo fikambanana mpandala ny nentin-drazana sy ny elatra havanana no mpanohitra mahery setran'ny vondrona feminista Diabe Aurat. Voakorontana ny Diabe Aurat Azadi tany Islamabad tamin'ny taon-dasa rehefa notorahan'ny olona mpanohitra avy amin'ny “Diabe Haya” biriky sy vato ny mpandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana. Tamin'ity taona ity, nikarakara diabe tamina tanàna maro manerana an'i Pakistan ny elatry ny vehivavy ao amin'ny antoko politika ara-pinoana Jamaat e Islami. Ny Firaisam-pianakaviana no teny filamatr'izy ireo fa tsy ny Feminisma.
Nanao fihetsiketsehana tao amin'ny Press Club Karachi miaraka amin'ny teny filamatr'ireo Vehivavy matanjaka sy fianakaviana matanjaka sy fianakaviana matanjaka ho an'ny firenena matanjaka ny elatra Jamaat e Islami Women. Mino tanteraka ny elatry ny vehivavy JI fa ny #NyHerinaynoFianakavianay sy #Firaisam-pianakaviana noho ny #Feminisma
Matetika voafetra amin'ny fanehoana ny teny filamatra sy ny sora-baventy voafantina hanaratsiana ny hetsika ny fitantarana ny diabe Aurat. Tamin'ity taona ity ny mpikarakara nangataka tamin'ny fampitam-baovao mba hanoratana ny anaran'ny mpitati-baovao amin'ny diabe, ary tsara kokoa raha vehivavy izany. Saingy tsy nizotra araka ny tokony ho izy izany ary niantso izany ho toy ny “manohitra ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety” ireo YouTubers izay naniry hitatitra ny hetsika.
Tsy mitovy hevitra amin'ity famerana ity aho amin'ny maha vehivavy sy mpanao gazety ahy. Tokony hamela ny fanaovana tatitra mahazatra ny fihetsiketsehana izay ahitana ihany koa ny fampielezan-kevitra manohitra azy ireo. Tsy mbola nisy teo amin'ny tantara ny hetsika mahomby manao fanakanana. Etsy andaniny, tokony hanana [fijery tsy mitongilana] ny mpanao gazety fa tsy ho taitaitra fotsiny ihany.
Hatramin'ny nanombohan'ny diabe, lahatsoratra amin'ny tambajotra sosialy maro be no namaly ny olom-pirenena mpanao gazety (ireo milaza tena ho mpanao gazety, ny YouTubers, mpamorona votoaty ao an-toerana, sns.) momba ny fomba ilazany ireo mpanao fihetsiketsehana, ny fametrahana fanontaniana tsy ampiheverana ka mahatonga azy ireo ho sadaikatra.
Mandrahona mpilatsaka an-tsitrapon'ny Diabe Aurat iray ao Karachi ity mpanao gazety (mavitrika tafahoatra) avy ao amin'ny Daily Pakistan ity. Nangatahana hiala tsimoramora izy taorian'ny nahitana azy nametraka fanontaniana manala baraka sy mampiady hevitra tamin'ireo mpandray anjara.
Osama no anarany ary niara-niasa tamin'ny media mpamoaka vaovao isankarazany izy.